Malta kwuru Herd Immunity, mepee njem nleta maka ndị ọbịa ụwa
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa ozi Malta » Malta kwuru Herd Immunity, mepee njem nleta maka ndị ọbịa ụwa
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Editorial • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ na -agbasa ozi Malta • News • Ịrụ ọrụ • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Nwere ike 26, 2021
Ọbara Malta na okpueze
Ọgba mgbochi ọrịa nwere ike ịbụ okwu anwansi ọhụrụ mgbe ọ bịara ịmepe ụlọ ọrụ njem na njem. Ozi njem nleta nke Maltas na-ekwu ugbu a Herd Immunity, gịnị bụ usoro obi ike - mana ọ dị mma na eziokwu ikwu?
Malta bụ mba nke European Union na mba Island na Oké Osimiri Mediterenian. Njem nleta bụ otu ụlọ ọrụ azụmahịa kachasị mkpa na Malta.
Ọ bụ ezie na ọtụtụ n'ime Europe nwere usoro ịgba ọgwụ mgbochi ngwa ngwa, mkpọchi mkpọchi, na mgbochi, ọtụtụ na-achọ ebe aga-aga n'ime EU ebe ezumike nwere ike ghara ịbelata oke na ọchị. Malta chọrọ ịbụ obodo a ma nwee okwu anwansi: A rụzuru Herd Immunity!
Nọmba ịgba ọgwụ mgbochi Malta dị mma mana ọ bụghị nke kachasị elu n'ụwa. O nweghi obodo dị n’ụwa a na - ekwu na a ga - egbochi ya. Malta bụ onye mbụ ebe a ma enwere ike ịtụ anya na mpaghara ndị ọzọ nwere nọmba ịgba ọgwụ mgbochi yiri nke a ma ọ bụ karịa ga-e copyomi okwu Herd Immunity maka onwe ha.
Ihe Malta kwuru na Herd Immunity ziri ezi ka ọ bụ enweghị isi?
Dabere na nkwupụta mgbasa ozi ekesara na Germany, Malta ghọrọ obodo izizi na European Union iji nweta mmerụ nke ìgwè mmadụ nke ọrịa COVID-19. Izu abụọ gara aga, agwaetiti Mediterenian ghọrọ obodo izizi na EU ịmalite ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa ndị gafere afọ 16. Na Whit Mọnde, Mee 24th, e nwetara ihe mgbochi ọrịa n'etiti ndị bi na nke mbụ ya na ihe karịrị pasent 70 nke ndị na-agba ọgwụ mgbochi. Pasent 42 nke ndị bi ugbua enweela nchebe zuru oke mgbe a gachara ọgwụ nke abụọ.
Dị ka Schoollọ Akwụkwọ John Hopkins Bloomberg si kwuo, A pụrụ ịkọwapụta Immunity nke Ọdachi mgbe ihe ka ọtụtụ n'ime ndị bi na ọrịa enweghị ọrịa na-efe efe, nke a na-enye nchebe na-enweghị isi - ma ọ bụ ọgụ nke ndị bi na ya (nke a na-akpọkwa mkpuchi anụ ụlọ ma ọ bụ nche ehi) - nye ndị na-enweghị nsogbu ọrịa.